15th International gvSIG Musangano - zuva 1 - Geofumadas
15th International gvSIG Musangano - zuva 1
Mbudzi, 2019 Geospatial - GIS, GvSIG, Innovations
Musangano wegumi nemashanu wepasi rose gvSIG wakatanga muna Mbudzi 15, ku Higher technical Chikoro cheGeodetic, Cartographic uye Topographic Injiniya - ETSIGCT. Kuvhurwa kwechiitiko ichi kwakaitwa nevakuru vePolytechnic University yeValencia, Generalitat Valenciana uye General Director weiyo gvSIG Association Alvaro Anguix. Mazuva ano angowirirana gvSIG Desktop 2.5, iyo yakagadzirira download.
SaGeofumadas, takasarudza kuenda pachiitiko ichi, mumazuva matatu, tichiziva zvakamirirwa nesoftware software, iyo nhasi yave iri danho rakazvarwa mune rePanpanic mamiriro nekukura kukuru kwepasiresese.
Musi uyu wekutanga wezuva chirongwa chekutanga chemashoko, chaitarisira vamiriri ve Institut Cartografic Valencià - Generalitat Valenciana, iyo CNIG - National Center yeGeographic Information yeSpain uye hunhu hweHurumende yeUruguay, iyo yakaratidza IDE yeUruguay. kuitwa mune gvSIG Online.
Pashure pacho, chikamu chechipiri chakaenderera, kwaizoongororwa IDE's. Pachiitiko ichi vamiriri veEuropean Thematic Center yeYunivhesiti yeMalaga vaivapo vachiongorora nyaya yavo, vaitaura nezvayo PANACEA MED Biodiversity. Zvadaro, Raúl Rodríguez de Tresca - IDB yakatora pasi, ichipa humbowo Geoportal yekutarisira mugwagwa muDominican Republic, kugadzira ruzivo rwekutsigira mukutarisira kwekutsvaga kwemigwagwa yemigwagwa nemabhiriji. Pamusoro pezvo, Rodriguez akati kukosha kwebasa rake nderekuti vanhu vazhinji varikuwana nzvimbo yekuziva.
"Zvatakawana ndiko kuvhurwa kwepfungwa. Parizvino pane vanhuwo zvavo vakabatana nemapurojekiti ayo anokumbira kuti awane mukana wekuwana mapuratifomu voburitsa-tarisa iyo data."
Mune ino imwechete yakavharwa block, Ramón Sánchez de Sans2 Innovación Sostenible SL, yakaratidza gvSIG Applience inotarisa pane kudzora masimba, ndiko kuti, nzira yekubatanidza kuongorora masisitimendi uye nekuibatanidza iyo neyemahara GvSIG GIS, kusimudzira kutonga kwezvivakwa uye mhinduro dzinoshanda panguva yechiitiko.
Iyo chechitatu block yezuva ine chekuita nekubatanidzwa, yakaitwa naJoaquín del Cerro, mumiriri we gvSIG Association, yakaratidza kuvandudzwa uye system system ye Kuita kwengozi uye kusanganisa neARENA2 yeDirector Directorate yeTraffic mune gvSIG Desktop. Oscar Vegas kune rumwe rutivi, akaunza Manual organisation yemvura inowanikwa network mhando kubva gvSIG nerubatsiro rweCurvertGISEpanet uye RunEpanetGIS zvishandiso, izvo zviri zvekushandisa kuburitsa hydraulic mhando dzemvura network, dzakaonekwa nzira yekuendesa ruzivo kuGIS, pamwe nekuzorora kwefaira kushandurwa uye data mharidzo.
Isu tinoenderera mberi nemharidzo yekupedzisira ye4to block nekuratidzwa kwaIván Lozano de Vinfo VAL, uyo airatidzwa zvikuru seVinfoPol, akagadzirisa maitiro ese anoenderana nebazi remapurisa, kubva kunzvimbo, kuzivikanwa kwematsotsi ezvipomerwa, kuvapo kwefaindi pakati pevamwe. Ichi chishandiso chakagadziridzwa sechiratidziro, uko iwe unogona kubata zvese zviitiko zvemapurisa ekuita nzvimbo, "tinogadzira yakakwana manejimendi yekuronga hurongwa hwese hunoshandiswa nemapurisa kubva muchirongwa chimwe chete."
Pakupedzisira, tinosvika kumagumo ezvinyorwa zvine dingindira reSoftware Dhizaiti. Muchikamu chino, nyaya dzekubudirira dzakaitwa nenharembozha dzakaratidzwa, semuenzaniso, Injiniya Sandra Hernández anobva ku Autonomous University ye State of Mexico, airatidza ruzivo Kurongeka uye kuunganidzwa kwedatha mumunda kuburikidza nemafoni mafoni uye michina, yekuongororwa kwekufamba kweiyo Nhoroondo muToluca. Neiyi purojekiti, vaipinda vakakwanisa kuona mifananidzo yebasa rakaitwa neye gvSIG mbozhanhare application, iyo iri yemahara uye ichishanda kunze kwenyika isina kubatana neWi-Fi kana data network, ruzivo urwu rwese rwatounganidzwa gare gare ruchazoongororwa uye kuongororwa mu gvSIG Desktop, kuburitsa mishumo pamusoro pekufamba kune vagari veToluca uye zvigadzirwa zvavanazvo pakufambisa kwavo kwemahara.
Iyo gvSIG Association inosimudzira kubatanidzwa mumusangano kwete chete wemasangano kana makambani makuru, asi zvakare kwakajekesa basa remumwe wevadzidzi vayo, Glene Clavicillas pamwe nehurongwa hwayo. Kuita kurima cartography kuburikidza nekuwongorora kwakawanda-kwenguva kwesatellite mifananidzo uye cadastral cartography.
Masikati akazorora neworkshops, apo vazhinji vakasainirana mahara. Iwo mabhaisikopu aisanganisira misoro senge gvSIG yekutanga, kuongororwa kwe data ne gvSIG kana ConvertGISEpanet - RunEpanetGIS - gvSIG kurapwa kweruzivo mumagetsi ekupa mvura.
Kana iwe uri danho rimwe kure neValencia, kuchine mazuva maviri asara; umo isu tinotarisira kufukidza kubvunzurudzwa nevatambi vatambi iyo ichatipa kuona kwavo kwekwavanofunga gvSIG ichaenda mumakore anotevera.
Previous Post«Previous Geo-Injiniya & TwinGeo Magazini - Yechipiri Edition
Next Post 15th International gvSIG Musangano - Zuva 2Next »